Sidoo kale waa Huawei Nova 2 iyo Nova 2 Plus | Androidsis
In kasta oo aysan qarsoodi ahayn maxaa yeelay waxaan lahaan lahayn qulqulo badan iyo, dhab ahaan, Shahaadada TENAA ayaa na siisay faahfaahin badan, shirkadda Shiinaha ee Huawei ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday taleefannadeeda cusub ee Nova 2 iyo Nova 2 Plus munaasabad ka dhacday dalkeeda hooyo, Shiinaha.
Toddobaadkii hore, Huawei wuxuu mar horeba xaqiijiyay in taleefannada casriga ah ee cusub la soo bandhigi doono si dhakhso leh, runtiina way leeyihiin. Hadaad rabto inaad ogaato dhammaan faahfaahinta Nova 2 cusub iyo Nova 2 Plus, ha moogaanin waxa ku xiga.
1 Huawei Nova 2 cusub: sawir gacmeedyada 20 MP iyo kamarad weyn oo labalaab ah
1.1 Kani waa Huawei Nova 2
Huawei Nova 2 cusub: sawir gacmeedyada 20 MP iyo kamarad weyn oo labalaab ah
Huawei Nova 2 cusub iyo Nova 2 Plus waxay ka kooban yihiin horumar ama nooc ka mid ah qaababka moodellada ay leeyihiin jiilkii hore iyo jiilkii hore ee khadka taleefannada casriga ah ee la bilaabay 2016.
Saldhigyadan cusub waxay la yimaadeen a jirka bir ka kooban ama unibody iyo qeexitaanadooda farsamo ee midba midka kale ficil ahaan isku mid yahay, ahaanshaha cabbirka shaashadda ama awoodda batteriga, kala duwanaanshahooda ugu weyn; labada astaamood, sida aad qiyaasi karto, ayaa uga weyn qaabka Plus.
Jiilkii ugu horreeyay ee Huawei Nova waxay ahaayeen kuwo laga xumaado xagga sawir qaadashada iyo fiidiyowga. Shirkadda, oo ka warqabta tan, waxay diiradda saartay qayb weyn oo ka mid ah dadaalladeeda ku aaddan hagaajinta astaamaha la xiriira qaybtan ee ku-xigeennadeedii waana tan sida ay ugu dartay a laba kamaradood oo waaweyn oo leh laba 12 lens iyo 8 MP lenses, iyo kamarad 20 MP ah oo labada dhinacba ah. Sidan oo kale, labada qalab, oo ay weheliyaan inta ka hartay astaamahooda, waxay ku jiraan meel aad u wanaagsan illaa iyo inta sawirku uu khuseeyo.
Kani waa Huawei Nova 2
Waxaan ku bilaabaynaa qaabka ugu yar, Huawei Nova 2, oo ay ku jiraan a Shan-inji Full HD bandhigay leh xalka 1920 x 1080p iyo a Kirin 659 processor sideed-xuddun oo ay weheliyaan 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah gudaha ah in isticmaalaha uu ku sii ballaarin karo kaarka microSD illaa 128 GB.
Nova 2 waxay bixisaa a 2.950 mAh baytariga, marka lagu daro Bluetooth 4.2, dareeraha faraha, kaamirooyinka aan soo sheegnay iyo, sida nidaamka qalliinka, waxay la imaaneysaa Android 7.0 Nougat hoosta saxeexdeeda saxeexa, EMUI 5.1. Waxaad ka heli doontaa faahfaahinta inteeda kale jadwalka kooban ee aan kaaga tagayo hoosta sawirka soo socda ee terminalka.
Tusaale Nova 2
Nidaamka hawlgalka Android Nougat 7.0 oo hoos timaadda EMUI 5.1 interface interface
Screen 5.0 "Full-HD oo leh xallinta 1920 x 1080 pixels) LTPS 2.5D
Gacaliye Kirin 659 octa-core (4 x A53 at 2.36GHz + 4 x A53 at 1.7GHz)
Kaydinta gudaha 64 GB oo leh taageero loogu talagalay kaararka xusuusta microSD illaa 128 GB
Kaamirada gadaal Dual 12 MP - PFAF - 1.25μm qiyaasta pixel - f / 1.8 aperture + 8 MP - oo leh iftiinka LED
Kaamirada hore 20 Xildhibaan
Xuduudaha kala duwan 4G LTE - Wi-Fi 802.11 b / g / n - Bluetooth 4.2 - GPS / GLONASS - Nooca USB-C
Tilmaamo kale sawirka faraha - Dual SIM (nano + nano / microSD) - 3D dhawaq ku wareegsan oo leh qalab AK4376A - Isku xiraha madaxa dhegaha ee 3.5mm
Batariga 2.950 Mah
Cabbirada X x 142.2 68.9 6.9 mm
Peso Gram 143
Qiimaha $ 365 ca.
Sidii aan horeyba u horumarinay, nooca Nova 2 Plus waa la mid ah nooca Nova 2, marka laga reebo faahfaahinta qaar sida cabirka shaashadda ama batterigaku. Waxaad ku baari kartaa dhammaan qeexitaankiisa jadwalka soo socda:
Tusaale Nova 2 Plus
Screen 5.5 "Full-HD oo leh xallinta 1920 x 1080 pixels LTPS 2.5D
Kaydinta gudaha 128 GB oo leh taageero loogu talagalay kaararka xusuusta microSD illaa 128 GB
Tilmaamo kale sawirka sawirka - Dual SIM (nano + nano / microSD) - AK4376A Chip chip - 3.5mm Jack headphone
Cabbirada 153.9 x 74.9 x 6.9 mm
Qiimaha $ 423 ca.
Huawei ee Nova 2 iyo Nova 2 Plus ayaa laga heli doonaa buluug, cagaar, dahab, madow iyo madow u kacay, oo lagu qiimeeyay 2499 yuan (qiyaastii $ 365) Nova 2 iyo 2899 yuan (qiyaastii $ 423) oo loogu talagalay Nova 2 Plus, taas oo, sidaan soo aragnay, sidoo kale ay kujirto labalaab kaydinta gudaha.
Hordhaca hore ayaa loo bilaabay iyo ayaa si rasmi ah loogu iibin doonaa bisha Juun 16 magaalada Chinku. Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan wax faahfaahin dheeraad ah oo laga helay helitaankeeda dalal kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Sidoo kale waa Huawei Nova 2 iyo Nova 2 Plus